Miantraika amin'ny fiainan'ny zanakao - Fahasalamana am-bava an'ny ankizy
Ny rora dia mpitatitra mikraoba, ary ankehitriny maro ny fandalinana. Mandritra ny fitsaboana, na dia mbola tsy misy aza ny tsy fahazoana aina, ireo caries nify ireo dia takelaka boribory ihany koa izay misampana mankany Rirol, ireo pathozena manokana ireo dia tsy azo ihodivirana amin'ny fiainany andavanandro, ary "hiparitaka" amin'ny b ...
BACKGROUND Ho fampirantiana nify lehibe indrindra sy manan-kery indrindra ao Shina, ny Sino-Dental® dia nanjary fampisehoana nify manara-penitra, izay manana laza malaza any Shina sy manodidina an'i Azia. Hatramin'ny taona 2019, dia tontosa soa aman-tsara nandritra ny 24 taona. Nandritra izay roapolo taona lasa izay, Sino-Dental dia niezaka ny ...
Fampidirana Ireo fitaovana raikitra amin'ny fanalana nify malpositioned dia ampiasaina amin'ny orthodontics ho an'ny tanora sy ny olon-dehibe. Na ankehitriny aza, ny fahadiovana am-bava sarotra sy ny fiakaran'ny vidin'ny takelaka sy ny sisa tavela mandritra ny fitsaboana miaraka amin'ny fitaovana multibracket (MBA) dia maneho doka ...
Ny sensor intra am-bava dia mitovy amin'ny isaky ny toeram-pitsaboana? Hatramin'izao, nieritreritra izahay fa ny sensor intra oral dia fitaovana nify fototra fotsiny izay ahafahantsika mandinika akaiky kokoa ny ferin'ny marary. Na izany aza, satria mitombo ny isan'ny sy ny fifaninanana eo amin'ireo mpitsabo nify, dia ...